Bonnie Crater Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Bonnie Crater
Bonnie Crater ndiye Mutungamiri & CEO we Yakazara Circle Insights. Asati ajoina Yakazara Circle Insights, Bonnie Crater aive mutevedzeri wemutungamiriri wekushambadzira kweVoiceObjects uye Kuziva. Bonnie akabatawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye mukuru mutevedzeri wemutungamiri wenyika kuGenesis, Netscape, Network Computer Inc., salesforce.com, uye Stratify. Yegumi wemakore murwi weOracle Corporation nemabhizimusi ayo akasiyana siyana, Bonnie aive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Compaq Products Division uye mutevedzeri wapurezidhendi, Workgroup Products Division.
Chitatu, December 20, 2017 Bonnie Crater
Iyo tarisiro yehungwaru hwekunyepedzera (AI) inoshandura zvese zvakagadzira buzz yakati wandei mumakambani ekutengesa mu2017, uye izvo zvichaenderera muna2018 nemakore ari mberi. Zvigadziriso zvakaita seSalesforce Einstein, yekutanga yakazara AI yeCRM, ichapa vashandi vekutengesa zvisati zvamboonekwa nezvezvinodiwa nevatengi, vanobatsira vanotsigira vanogadzirisa matambudziko vatengi vasati vatombovaona uye kurega kushambadzira vachienzanisa zviitiko kusvika padanho rakanga risingakwanisike. Izvi zviitiko ndizvo zvinotungamira pamucheto we
4 Zaruriro Unogona Kufukura neSalesforce Dhata
Chipiri, August 18, 2015 China, November 5, 2015 Bonnie Crater
Vanoti CRM inongobatsira chete senge data irimo. Mamirioni evashambadzi anoshandisa Salesforce, asi vashoma vane nzwisiso yakasimba yedhata ravari kudhonza, zviyero zvipi zvekuyera, zvinobva kupi, uye kuti vangavimba zvakadii nazvo. Sezvo kushambadzira kuri kuramba kuchiwedzera kufambiswa nedata, izvi zvinowedzera kudiwa kwekunzwisisa zviri kuitika kumashure-kwe-zviitiko ne Salesforce, pamwe nezvimwe zvishandiso. Heano zvikonzero zvina nei